CARROT Weather waa la cusbooneysiiyay wuxuuna u keenayaa widget -yada XL iPadOS 15 | Wararka IPhone
CARROT Weather waa la cusbooneysiiyay wuxuuna u keenayaa aaladaha XL ee iPadOS 15
Angel Gonzalez | 21/09/2021 20:00 | Barnaamijyada IPhone
Cusub cusub App cimilada loogu talagalay iPhone wuxuu la yimid macruufka 15. Iyada oo cusboonaysiintaan cusub dib -u -qaabaynta astaanta lagu daray iyo sidoo kale tiro aad u badan oo macluumaad dheeri ah oo lagu diyaariyey waxyaabo kala duwan oo afar geesle ah. Intaa waxaa dheer, macruufka 15 iyo iPadOS 15 waxaa ku jira sheekooyin kale sida imaanshaha widget -yada XL ee iPad -ka, wax horeyba loogu seegay macruufka 14. CARROT Cimilada waa app ka duwan si loo hubiyo cimilada waxaana loo cusbooneysiiyay nooca 5.4 oo la jaanqaadaya astaamaha cusub ee nidaamyada hawlgalka cusub. Astaamahaas cusub waxaa ka mid ah widget -yada XL, mowduucyo cusub, iyo astaamo cusub.
CARROT Cimilada ayaa soo saarta noocyadeeda 5.4 oo la jaan qaadaya macruufka 15 iyo iPadOS 15
CARROT Cimilada waa mid si aad ah u awood badan (iyo asturnaanta miyir-qabka) barnaamijka cimilada oo bixiya saadaalin qosol-qallooc leh.
Ku cusub nooca 5.4 ee CARROT Weather waxaa ku jira imaatinka Aaladaha waaweyn ee iPad -ka leh iPadOS 15. Waxaa jira laba widget: 'My Saadaasha' iyo Khariidadaha oo ka faa'iideysanaya shaashadda weyn si ay u bixiyaan xog ku habboon. Si kastaba ha noqotee, xubinnimada Premium ayaa looga baahan yahay inay iibsato cusboonaysiinta xogta asalka ah, iyo aaladda Khariidadaha waxay la jaan qaadi kartaa oo keliya xubinnimada Premium Ultra.
Iyaguna waa lagu daray mawduucyada caadooyinka cusub oo leh midabyo asal ah, astaamaha gaarka ah iyo midabada kala duwan. Si loo habeeyo mowduucyadan cusub xubinnimada Premium Club ayaa loo baahan yahay. Ku socoshada astaamaha, waa lagu daray saddex astaamood oo cusub kaas oo laga beddeli karo goobaha CARROT Cimilada.
Ku sii wadida wararka la xiriira xubinnimada Club Premium, waa la soo bandhigay cusboonaysiiyaan ogeysiisyada ogeysiisyada waxyeelada 'weyn' ama 'masiibo' xarunta wargelinta. Intaa waxaa dheer, sidoo kale waa la soo bandhigay dhibaato cusub oo xariif ah ee watchOS, oo la mid ah macluumaadka aan ka heli karno abka. Goobahan waxaa laga beddeli karaa barnaamijka Apple Watch ee iPhone -ka.
IOS 15 iyo iPadOS 15 ayaa halkan jooga, tani waa waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor intaadan cusboonaysiin
Ugu dambeyn, waa la soo bandhigay shaashado cusub oo leh faahfaahinta saadaasha hawada, saadaasha saacadlaha ah iyo saadaasha maalinlaha ah. Siyaabo cusub oo loo fasiro xogta ayaa lagu soo bandhigay astaamo hore loo habeeyay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » CARROT Weather waa la cusbooneysiiyay wuxuuna u keenayaa aaladaha XL ee iPadOS 15
Apple wuxuu sii daayaa noocyada 1 beta ee macruufka 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1 iyo tvOS 15.1
Waa maxay ciyaarta Eebaha siddooyinku: Dagaal ayaa na siiya
Fiiri doorashadayada qiimo dhimista ugu fiican ee tignoolajiyada iyo Apple